Ikebukuro Station (21st Aug)
Events • Aug 21, 2021
8月21日、我々TTAJチームは、東京の池袋駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週はRTM チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
そして、大変 お忙しい中、ご協力してくださったカメラマンの方々、お水やお菓子などサポートしてくださった寄贈者、TTAJのボランティア、皆様にも誠に有難う御座います。 🙏🙏
"NUGကိုလက်ခံရေး စစ်ကောင်စီကိုငြင်းပယ်ပေး" ✊🏻
ယမန်နေ့ ၈ လပိုင်း ၂၁ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Ikebukuro ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၂ နာရီခွဲမှ ၅ နာရီခွဲ အတွင်း
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၄၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မွန်းတည့်နေပူကျဲတဲ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မငြီးမငြူဘဲ အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမားများ၊ Volunteers များအတွက် ရေဘူးနှင့်မုန့်များ လှူဒါန်းပေးပါသောအလှူရှင်များ ၊ TTAJ's Volunteers များအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ 🙏
"Accept NUG, Reject Military"
21st of August, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Ikebukuro Station, Tokyo.
We were able to hand out over 400 pamphlets and 400 pocket tissues from 2:30pm till 5:30 pm.
We would like to express our deepest gratitude to Camera Men, Snacks and Water Donors and especially to our beloved volunteers who came to support us weekly under this vicious heat.